मृत्यु उपत्यका, संयुक्त राज्य अमेरिका मा पर्यटन | यात्रा समाचार
जस्तो यसको नामले सts्केत गर्दछ, मृत्यु उपत्यका जस्तो देखिन्छ मृत्यु उपत्यका: यो विशाल छ, यो मरुभूमि छ, खैरो छ, यस्तो देखिन्छ कि यसले जीवन समावेश गर्दैन। यो एउटा उपत्यका हो नेशनल पार्क स्वामित्व राख्नुहोस् र जब यो खैरो परिदृश्य छ पनि योaको अंश हो जैव क्षेत्र रिजर्व।
हामी प्राय: संयुक्त राज्य अमेरिकाको यसको प्रख्यात शहरहरू भन्दा बाहिरको पर्यटन आकर्षणको बारेमा धेरै कुरा गर्दैनौं, तर कुनै श doubt्का बिना त्यस्तो ठूलो देशका धेरै गन्तव्यहरू छन् र यो उपत्यका ती मध्ये एउटा हो। आउनुहोस् पत्ता लगाऔं।
1 मृत्यु उपत्यका
2 मृत्यु उपत्यकामा प्रकृति
3 मृत्यु उपत्यका भ्रमण गर्नुहोस्
यो पूर्वी क्यालिफोर्नियामा छ, नेभाडाको सीमामा र यो संसारको सब भन्दा चर्को र ड्राईस् स्थान हो जब गर्मीले शासन गर्दछ। यो मोजाभ मरूभूमिको अंश हो र यसको वरपर क्षेत्र छ .7800.। वर्ग किलोमिटर। यो अलास्का बाहिर सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी राष्ट्रिय पार्क हो र यसका परिदृश्यहरू सामेल छन् बालुवा टिब्बा, घाटी, ओएसिस र उच्च हिमालहरू.
आज यसलाई चिनिने नाम १ th औं शताब्दीको मध्यमा क्यालिफोर्निया गोल्ड रशको समयमा प्राप्त भयो। यो पार गर्न यत्ति गाह्रो थियो, यसको आकाशको जलिरहेको घाममा २ 24 घण्टा बाँच्न कत्ति गाह्रो थियो, त्यो मृत्यु सामान्य थियो। यस उपत्यकामा कठोर वातावरणको बावजुद, केहि लोकप्रिय श्रृंखला र चलचित्रहरू विश्वव्यापी रूपमा फिल्माइएको छ, जस्तै स्टार वार्स
र निस्सन्देह यो स्थान सयौं बर्ष सम्म मानिसहरूले बसोबास गर्ने ठाउँ पनि हो। स्थानीय जनजाति टिम्बिशा शोसन हो र आजसम्म पनि, उपत्यकाका धेरै कुनाहरू अझै पनि उनीहरूद्वारा पवित्र स्थानहरू मानिन्छन्।
जब २० औं शताब्दीको अन्त्यमा बोराक्स र चाँदीको शोषण सुरु भयो चिनियाँ खानीहरु आइपुगे। तिनीहरूले Panamint शहर निर्माण गरे तर बसेनन्। को जापानी, अमेरिकीहरू तर दोस्रो विश्वयुद्धको बेला देशद्रोहको शंका रहेको, यहाँ १ 1942 XNUMX२ मा शिविर, क्याम्पो मन्जारारमा आयोजित गरिएको थियो।
मृत्यु उपत्यकामा प्रकृति
यी बालुवा टिब्बा, नाटकीय घाटीहरू, र बाँझो भूमिहरूको बीचमा केहि बाँच्दछन्। कम उचाइको बावजुद, पुगेको जबरदस्त गर्मीको बावजुद गर्मी को बीचमा 55 XNUMX डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी। जनावरहरुको मामला मा यहाँ छन् २400१ प्रजाति, केहि यस्तो परिस्थितिको लागि अरूले अनुकूलन गरियो किनकि तपाईं पानी खोज्न जादूगर हुनु पर्छ। यसैले, त्यहाँ मरुभूमि कछुवा, कोयोट्स, खरायो, काang्गरु चूहा र उभयचर, स्तनपायी सरीसृप, चरा, माछा र हो, पुतलीहरु को एक विशाल संग्रह हो।
वनस्पतिको सन्दर्भमा, सबै कुराको बाबजुद पनि, त्यहाँ विविधता पनि छ। त्यहाँ वनस्पतिहरु संग क्षेत्रहरु छन्, केहि संग पाइन रूखहरू र झाडीहरूपानी संग मिल्ने ठाउँमा जहाँ पानी भूमिगत हुनको लागि प्रबन्ध गर्दछ। अवश्य पनि, मरुभूमिका राजाहरू हुन् क्याक्टस र सुकुलेन्टहरू जे होस् वसन्त र ग्रीष्म someतुमा जंगली फूलहरू धेरै रंगीन।
मृत्यु उपत्यका भ्रमण गर्नुहोस्
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामान्य चीज भनेको कार भाँडामा लिनु हो किनभने यो विशाल देश हो। मुख्य राजमार्ग जुन डेथ भ्याली नेश्नल पार्क मार्फत काट्छ क्यालिफोर्निया राजमार्ग १ 190 ० हो। पार्क सबै वर्ष खुला छ एक समय तालिकामा जुन प्राय: अपरिवर्तित: दिउँसो १२ देखि १२ बजे सम्म।
El फर्नेस क्रिक आगन्तुक केन्द्र हप्ताको प्रत्येक दिन बिहान 8 देखि साँझ। सम्म खोल्नुहोस्। यहाँ पार्क र यसको इतिहास बारेमा एक संग्रहालय र २० मिनेट फिल्म छ। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि विशिष्ट भ्रमण गर्नु अघि रोक्नु उत्तम हो। आवास? त्यहाँ धेरै शिविरहरू छन्: यस ठाउँमा रहेको शिविर सम्पूर्ण बर्ष खुला छ तर आरक्षण अक्टुबर १ 15 देखि अप्रिल १ 15 सम्म मात्र स्वीकार गरिन्छ।
अन्य क्याम्पग्राउड, टेक्सास स्प्रिंग्स क्याम्पग्राउण्ड सामान्यतया मध्य अक्टुबर देखि मध्य अप्रिलमा खुला हुन्छ र त्यहाँ कुनै पहिलेका आरक्षणहरू छैनन्, यदि तपाईं आइपुग्नुभयो र ठाउँ छ भने, यो तपाईंको हो। सनसेट शिविर उही मितिहरूमा उहि मितिहरूमा र उही पद्धतिसँगै खुल्छ, र स्टोभपिप वेल्स क्याम्प सामान्य रूपमा अक्टुबर १ 15 देखि मे १० सम्म खुल्छ। त्यहाँ अन्य शिविरहरू छन्, वाइल्ड्रोज, सबै वर्ष खुला, आप्रवासी, र थोरन्डाइक।
तर त्यहाँ केवल शिविरहरू छन्? होईन त्यहाँ बिभिन्न कोटीहरूको होटलहरू छन्। पार्क भित्र स्टोभिपिप वेल्स गाउँ, एक रिसोर्ट छ, मृत्यु होलीमा ओएसिस यसको होटेल र डल्ला संगै, सबै बर्ष खुला रहन्छ, Panamint Springs Resort। पार्कबाहिर, बसोबास वरपरका समुदायहरूमा उपलब्ध छ जस्तै बिट्टी, लस भेगास वा पह्रम्प, नेभाडा, शोसन, लोन पाइन, रिजक्रेस्ट वा विशप, क्यालिफोर्नियामा।
तपाईं मृत्यु घाटी कहिले जानु पर्छ? ठीक छ, जब यो midsummer छैन। पतन अक्टोबरको अन्तमा पार्कमा आउँदछ तर तापमान अझै सुखद तातो छ र आकाश खाली छ। जाडोमा दिन चिसो रातहरू र कहिलेकाँहि विचित्र तूफानका साथ दिनहरू राम्रै हुन्छन्। पोष्टकार्डहरू हिउँको साथमा माथिल्लो चुचुराहरूको चुचुराहरूसँगै स्टुपेन्डस हुन्छन्। तर सबैभन्दा लोकप्रिय र पर्यटन मौसम वसन्त हो। जंगली फूलहरू तातोमा थपिन्छन् र पूर्ण सूर्यमा दिनहरू।
हामी आवास र पार्कको प्रकृतिको बारेमा कुरा गर्दछौं, तर डेथ भ्यालीमा के पर्यटक गतिविधिहरू गरिन्छन्? ठीक आकाश मुनि तपाईं हिंड्न र परिदृश्य चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं चढ्न वा गर्न सक्नुहुन्छ हाईकिंग, xx4 ट्रक सवारी गर्दै, माउन्टेन बाइकि।, चरा अवलोकन वा निर्देशित टुरहरू वा टूर स्टारको लागि जस्तो स्टारको लागि साइन अप गर्नुहोस्। पार्कको महिमाले तपाईंको सास टाढा लैजानेछ।
इनडोर गतिविधिहरूको सम्बन्धमा त्यहाँ दुई छन्: एक तर्फ तपाईं सक्नुहुन्छ फर्नेस क्रिक भिजिटर केन्द्र भ्रमण गर्नुहोस् र अर्कोमा हो Scotty Castle, २० औं शताब्दीको २० औं शताब्दीमा Spanish० सेकेन्डमा निर्माण गरिएको स्पेनी शैलीको हवेली, सुरुnelहरू र सबैको साथ, जुन कहिलेकाँही निर्देशित भ्रमणका साथ जनताको लागि खुला हुन्छ र यसको संग्रहालय र स्नैक बार पनि हुन्छ। यो हाल बन्द छ, तर तपाईं जानु अघि वेबसाइटको चारैतिर हेर्नुहोस् र तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि यो पहिले नै फेरि काम गरिरहेको छ।
यो महल-हवेली आफ्नो साथी वाल्टर स्कट, काउबॉय र हास्यास्पद मान्छेको सहयोगमा छुट्टीमा छुट्टीको घर अल्बर्ट मुस्सी जॉनसन नामक ईन्जिनियरको सपना थियो जसले अन्ततः यस घरको नाम राख्यो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मृत्युको उपत्यका खाली र डरलाग्दो ठाउँ होइन। यसको विपरित, यसको खरानी परिदृश्यहरू जीवनले भरिएका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » संयुक्त राज्य अमेरिका » मृत्यु उपत्यका, संयुक्त राज्य अमेरिका मा पर्यटन
ट्राजनको स्तम्भको रहस्य र विवरणहरू
न्यूयोर्कमा के हेर्ने